Ndiza kubakho kwiNgqungquthela yeTechPoint ngoLwesihlanu | Martech Zone
Ndiza kubakho kwiNgqungquthela yeTechPoint ngoLwesihlanu
NgoMvulo, Novemba 5, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ngale ntsasa, uMark Gallo (Patronpath Mongameli) wabelane ngenqaku elikhulu kwi I-Indianapolis Star malunga nembali kunye neenjongo ze Techpoint, iqela elikhuthaza itekhnoloji yengingqi apha e-Indianapolis.
Ngelishwa, ndamenywa ngabantu abanobubele Izisombululo zeBitwise ukuba babe lundwendwe lwabo kwingqungquthela yeTechPoint ngalo Lwesihlanu. Enkosi kuRon noKim ngesimemo! UMark undinike usuku lokuya kuzimasa kwaye ndiyalixabisa kakhulu. Le 'yidolophu encinci' xa kuziwa kubuchwephesha kwaye ndicinga ukuba kubalulekile ukuba sigcine unxibelelwano lwethu nezinye iifemu zetekhnoloji esekwe kunye nezinye izinto zokuqala!
Ke ukuba uhlala edolophini kwaye uya kwingqungquthela yeTechPoint, ndiza kukubona apho! Ndonwabile ukudibana noJim Jay kunye nothungelwano nezinye iinkokheli zommandla kwicandelo lobuchwepheshe elikhulayo apha e-Indianapolis.
tags: Ababhali bekopiUvavanyo lwe-imeyileumxholo wangaphandleIintengiso ze-facebookIxabiso lentengiso ku-facebookIntengiso ye-facebookUsetyenziso lwe-facebookmiloUkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethiSocial Media Marketingzoomerang
I-WordPress: UkuKhangela indawo ekuKhangelwa kuyo ngeGoogle Analytics
Ukuthengisa iPilgrim kuthetha ukuBambisana
Nov 5, 2007 kwi-10: 50 AM
Enkosi ngokuyichaza, bendingazi ukuba kuyaqhubeka, kwaye nangona ngekhe ndibekhona kuloo ndawo ngelo xesha, ukuba bendinguye bendiya kubakho. UScott
Novemba 5, 2007 ngo-7: 12 PM
UDoug- ndizakubakho… ndiyathemba ukukubona apho! Sisebenza noJim Jay ukuze sixhase i Iingcali zeNkomfa yeShishini kwi-Intanethi!
Novemba 5, 2007 ngo-8: 02 PM
UJim omangalisayo! Ndijonge phambili kulo msitho kwaye ndicinga ngawe kunye nezinye.